Sina 4 andry lalina fanaovana sary fanontana hydraulic press sy fanamboarana | Zhengxi
Ny milina fanaovana pirinty fanaovana sary lalina 4 dia mety indrindra amin'ny fizotry ny metaly vita amin'ny metaly toa ny mamelatra, miondrika, mitrongy, mamorona, manafosafo, manisy totohondry, manitsy, sns, ary ampiasaina indrindra amin'ny famelarana haingana sy fananganana metaly.
Ny milina fanaovan-gazety dia namboarina ho toy ny H-frame izay manana rafitra tsara indrindra, avo lenta, maharitra sy azo itokisana ary ampiasaina amin'ny fanerena ireo vy metaly ary afaka mamaly ny fangatahana famokarana amin'ny 3 fiovana / andro.
Tsindry varingarina lehibe
Maty hery Cushion
Max. tsindry rano
Kibon'ny varingarina lehibe
Fialana amin'ny ondana Cushion
Die haben'ny ondana
Halaviran'ny fivezivezena amin'ny toeram-piasana
Tetikasa mitovy amin'izany
Ny famolavolana ny masinina manontolo dia mandray ny famolavolana ny fanatsarana ny solosaina ary ny famakafakana amin'ny singa voafetra. Ny tanjaka sy ny hamafin'ny fitaovana dia tsara, ary ny fisehoany dia tsara.
Ny ain'ny bokotra dia voasedra mafy, ary tsy simba amin'ny fanerena in-1 tapitrisa.
Fanampiana ny lesoka sy ny masinina, mamaritra ny asan'ny efijery, manazava ny fanairana amin'ny milina ary manampy ny mpampiasa hahafehy haingana ny fampiasana ny milina
Ny tsipika fahazoana mpanapaka elektronika dia voahodina tsy miankina, miaraka amin'ny fahaiza-manao fanoherana mahery vaika
Fanaraha-maso nomerika ny kapila servo sy fampidirana ny kapila
Ny capacitor busbar ankapobeny dia nohavaozina tanteraka, ary ny capacitor manana adaptation ny maripana midadasika kokoa sy ny androm-piainana lava kokoa no ampiasaina, ary ny fiainana teoretika dia nitombo in-4;
Ny valiny amin'ny 50Mpa dia 50ms, ny faneriterena mihoatra ny tsindry dia 1.5kgf, ny fotoana fanamaivanana dia 60ms, ary ny fiovan'ny tsindry dia 0,5kgf.
Ny famolavolana simulation dia tantanan'ny rindrambaiko Ansoft, ary ny fahombiazan'ny elektromagnetika dia ambony; Amin'ny fampiasana fientanentanana NdFeB avo lenta, kely ny fatiantoka vy, avo kokoa ny fahombiazany, ary kely kokoa ny hafanana;
Ny hafainganam-pandehan'ny valiny haingana dia manome antoka ny fisokafan'ny fanokafana sy ny fanidiana, ny fahamendrehana eo amin'ny toerany dia mety hahatratra ny 0.1mm, ary ny fahaiza-manao amin'ny toeran'ny toerana manokana dia mety hahatratra ± 0.01mm.
Ny modely algorithm PID avo lenta sy valiny avo lenta dia miantoka ny tsindry rafitra miovaova sy ny fiovaovan'ny tsindry ambany noho ny ± 0,5 bar, fanatsarana ny kalitaon'ny vokatra.
1.Ny tanky napetraka dia rafitra fanivanana noterena noterena (fitaovana fanamafisana rano rano karazana lovia indostrialy, fanamafisana amin'ny alàlan'ny rano mikoriana, hafanan'ny solika≤55 ℃, alao antoka fa afaka milona mandritra ny 24 ora ny milina.)
Previous: Tsindry fanamafisam-peo hydraulic block
Manaraka: H frame metaly lalindalina manao pirinty hydraulic
Famindrana sensor (tsy voatery)
H frame metaly lalindalina manao pirinty hydraulic